Maalinta: Juun 25, 2013
3. Garoonka diyaaradu ma yahay mid sahlan ama khatar
Madaarka Miyay Suurtagal tahay Mise Khatar? geedi socodka samaynta mashruuca garoonka diyaaradaha, sida in la dhiso magaaladiisa xiriir, abuuri doonaa saamaynta dhaqaale iyo bulsho, taas oo düznlen by Uli Turkey Airport 'City iyo Istanbul [More ...]
Raadinta ADARAY 29 waxay u gudbin doontaa Sapancaya ka dib marka la beerto
Duullimaadyada ADARAY 29 waxay kusii fidi doonaan Sapancaya wixii ka dambeeya Oktoobar Duulimaadyada Adaray oo ay maamusho Dawladda Hoose ilaa Arifiye waxay kusii fidi doontaa Sapanca kadib 29 Oktoobar. Soo bandhigista YHT Adaray waxay noqon doontaa buundada u dhaxaysa magaalada iyo xarunta. [More ...]
Miyuu Bursa muhiim u yahay Istanbul?
Bursa muhiim ma u tahay Istanbul? Hadaan Bursa agteeda ahayn Istanbul waxa ay noqon laheyd magaaladiisa iyo xaaladeedii ugu dambeysay iyo sida mustaqbalkeeda looga wada hadli doono. Qaar ka mid ah magaalooyinka Anatolia waxay leeyihiin ururo caalami ah [More ...]
Mashruuca nidaamka tareenka ee Zonguldak - Kozlu
Mashruuca nidaamka tareenka ee u dhexeeya Zonguldak iyo Kozlu Maqaalkayaga cinwaankiisu yahay sistem Nidaamka Tareenka Geçen ee la daabacay usbuucii hore, sharraxaad waxaa u diray Madaxweynaha Golaha Magaalada Yesari Sezgin e-mayl. Mawduuca Mr. Sezgin [More ...]
Hani wuxuu noqon doonaa xarunta YHT
Bal eeg, waxaan noqonaynaa xarunta loo yaqaan 'YHT shalay', waxaan idin kula wadaagnay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan maal-gashiga tareenka ee ay ku dhawaaqday Wasaaradda Horumarinta. Warkayagu wuxuu ahaa niyad jab weyn gaar ahaan aniga. Sababta oo ah tareenka [More ...]
Baku-Tbilisi-Kars Railway 3 wuxuu isu keenayaa Wasiirka Gaadiidka dalka ee Gaadiidka Binali Yıldırım, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa u imaanaysa Kars xafladaha alxanka ee Baku-Tbilisi-Kars Railway (BTK). Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Binali [More ...]
RayHaber 25.06.2013 Warbixinta Shirka
Adeegga takhtarka goobta shaqada ayaa la bixin doonaa (TÜDEMSAŞ) T / F R. Ün Farris dayactirka iyo howlaha dayactirka ee labada mashiinnada waaweyn. [More ...]
Helitaanka Golaha IMM
Su’aal gaadiid ku socota Golaha IMM Yaa siiya xaqa marin u lahaanshaha xanibaada? Ayaa ku amraya dadka reer Istanbul inay xannibaan xuquuqda gaadiidka? Waa maxay aasaaska sharciga iyo caddeynta tilmaanta? Xubin kawnsalka CHP IMM Si toos ah ula xiriir Hakkı [More ...]
Miyuu jiraa maalgelin la'aan madaarka 3?
Cengiz İnşaat Gudoomiyaha ururka iskaashatada oo ku guuleystey qandaraaska 3aad ee garoonka, Mehmet Cengiz wuxuu yiri, "Wali maanaan bilaabin maalgelin. Laakiin rajo kama lihin. ” Tan seddexaad ee Istanbul oo leh 3 milyan oo rakaab ah [More ...]
Socdaalka Ankara Concert Live
Socdaal lala galo riwaayadaha tooska ah ee magaalada Ankara Metro: Kuwa la safraya Ankara metro waxay leeyihiin safar wanaagsan oo ay ku dheehan tahay riwaayadaha mini-tooska ah ee lagu bixiyo maraakiibta. Koox arday jaamacadeed ah ayaa la joogay Bisha Cas si ay lacagtooda jeebka ugu helaan. [More ...]
Dhaqanka Jasiiradaha Turki ee Turkiga ayaa ku kulmay Matxafka TCDD
Dhaqanka Jabbaan-Turki ee Matxafka TCDD: Japan Saaxiibtinimada Xiriirka Saaxiibtinimada Kala-gaarka ah ee Izmir (JIKAD) waa isu keentay dhaqannada Turkiga iyo Jabaan. Bandhiga sawir-qaade ee Origami iyo sawir ayaa laga furay TCDD Izmir Museum iyo Art Gallery [More ...]
MHP Manisa ku xigeenka Erkan Akçay, Bayburt ee baarlamaanka ayaa siiyay labo su'aalood oo kala duwan. Baadhitaanka mashruucan ayaa dhammaystiray mashruuca tareenka ee Erzincan-Trabzon Bayburt oo aan lagu darin iyo maalgashiga gadiidka 2012 Bayburt [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Adeegga kormeerka iyo la-talinta ayaa la qaadi doonaa (Haydarpasa-Ankara Khadekoy-Sapanca Khadka 1 iyo Khadka 2 Khadka Casriga ah ee Kaabayaasha Mushaharka ah ee dhismaha)
TCDD Plant 1. Kormeerka Agaasinka guud ee kormeerka iyo adeegyada la tashiga ayaa la heli doonaa (Haydarpaşa-Ankara Line Köseköy-Sapanca Line 1 iyo Line 2 Khadka Qorsheynta Kaabayaasha Kaabayaasha Qaab-dhismeedka) KU SOO SAAR [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Calaamadaha iyo Tamarta Awoodda
Geedka TCDD 1.Region iyo Sigaliska Sahayda Weelka Cuntada ee SAXANKA iyo ISSUES waxay la xiriirtaa si ay ula tacaasho maqaallada 1- Macluumaadka Maamulka Maamulka Loo shaqeeyaha 1.1. Milkiilaha ganacsiga ee Maamulka; a) Magaca: [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Qalabka dayuuradaha waxaa loo iibin doonaa isticmaalka laydhadhka
Qeybaha TCDD Guud ahaan qeybaha Tacliinta waxaa loo iibsan doonaa si loogu isticmaalo aagagga mowduuca KU SAABSAN SAAMAYNTA IYO ISSUESKA OO LA XIRIIRAY KHUDBADAHA QODOBKA 1- Macluumaadka maamulka ganacsiga 1.1. Cinwaanka Koorsada: TCDD [More ...]
Xarunta TCDD 1.Region Agaasinka Rakibaadda iyo u xilsaaraynta nidaamka ATS KU XIDHIIDHKA QANACSIGA IYO ISSUESKA OO KU SAABSAN KU SAMEEYAASHA HADDII QARAXA Qodobka 1- Macluumaadka Maamulka Ganacsiga 1.1. Milkiilaha ganacsiga ee Maamulka; a) Magaca: [More ...]